कति स–सना कुरामा लुकेको छ खुसी ? » देशपाटी
कति स–सना कुरामा लुकेको छ खुसी ?
हिसाब किताब गर्दा हामीले विताएका धेरैजसो क्षण दुःख, चिन्ता, ग्लानी, निरासा, उदासीमा वितेको हुनसक्छ । हामी लामो अवधी खुसीको स्थितिमा सायदै रहन सक्यौं । जबकी खुसी हामीभित्रै थियो । तर, त्यसलाई जगाउन सकेनौं ।
केही नयाँ योजना
केही राम्रो काम
केही राम्रो सोचौं